CC Warsame oo ku baaqay in loo midoobo iska qabashada Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsme, ayaa mar kale ku celiyay in dadka reer Muqdiho aysan kaliya Musharixiinta ku hallayn iska qabashada Farmaajo, oo uu aamnisan yahay inuu isku badalay Hoggaamiye Kooxeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - CCWarasme, ayaa ganacsatada, saraakiisa, aqoonyahannada, wax garadka, haweenka iyo guud ahaan bulshada gobolka Banaadir ugu baaqay, in ay si wadajir uga hor tagaan halista uu Farmaajo la soo hig leeyahay.
Hoggaamiyaha Wadajir, wuxuu sheegay in hoggaanka umadda looga baahan yahay isa saaridda masuuliyad guud, wuxuuna tilmaamay in aysan jirin cid ay ku halleeyaan Kalitaliska oo si qaas ah ay kaga sugaan, nadad iyo xasillooni.
“Hormuudka bulshada ama madaxyawaynta (Elite) masuuliyad dheeri ah ayaa saaran. Ma aha in ay sugaan halis ku soo socota in ay hoyga ugu soo gasho. Mana ah in ay is yiraahdaan dad kale ayaa idinka xigsanaya ama xalaniya. Madaxwaynta Muqdisho ee siyaasi, oday dhaqan, ganacsade, aqoonyahan, saraakiil, haween iyo dhalinyaraba leh waa in ay si wadajir ah halista ka hortagaan inta aysan guryaha mid mid ugu soo gelin, mana ah in ay cid gooni ah ku haleeyaan”. Ayuu yiri Warsame.
Warsame, wuxuu tilmaamay in Farmaajo uu halis ku yahay Soomaali oo dhan, hayeeshee, hadda dhibaatada ugu badan uu ku haayo shacabka Muqdisho, “Farmaajo wuxuu halis ku yahay Soomaaliya oo idil, laakiin halistiisu haatan Muqdisho ayey gaar u tahay”.